ဘယ်လိုအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များသို့မဟုတ် Verde ဂွာတီမာလာကွက်များလုပ်နေကြတယ်? | Flodeal Inc မှ.
ဘယ်လိုအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များသို့မဟုတ် Verde ဂွာတီမာလာကွက်များလုပ်နေကြတယ်?
Verde ဂွာတီမာလာအဖြစ်လူသိများလေ့အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယကနေစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စကျင်ကျောက်လူကြိုက်အများဆုံးအိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကို Rajasthan အိန္ဒိယပြည်နယ်အတွင်းရှိ Rishabhdeo မြို့အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ကိုလည်း Kesariya ဂျီအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ် Udaipur အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းဟုခေါ်သည်, က Udaipur နှင့် Kesariya ဂျီအတွက်ကျောက်တုံးကြီးများကြောင့် (Hriisbdeo).
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ကွက် / Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
အဆိုပါအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများ၏လုပ်ကွက်စက်တွေကိုမြင်လျှင် multiblade ဂန်ပေါ်ဖြတ်နေကြတယ်. အဆိုပါစက်များလုပ်ကွက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလျှော့ချဖို့လုပ်နေကြတယ်. အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များအောင်, ကျနော်တို့ထဲမှာကြွပ်အောင်သေးငယ်တဲ့လုပ်ကွက်ကိုသုံးပါ အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက် ကထိရောက်သောကုန်ကျသည်နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျမှနျရဲ့ margin အပေါ်လွန်သွားနိုင်ပါတယ်ကတည်းက. လုပ်ကွက်များ၏ယေဘုယျအရွယ်အစားများမှာ 15-160 စင်တီမီတာ x ကို 160 – 180 စင်တီမီတာ x ကို 240 – 280 စင်တီမီတာ, ဒါပေမဲ့အုပ်ကြွပ်အောင်ဘို့ကျနော်တို့၏အရွယ်အစားအတွက်လုပ်ကွက်ကိုသုံးပါ 65-90 စင်တီမီတာ x ကို 65-100 စင်တီမီတာ x ကို 180-240 စင်တီမီတာ. အဆိုပါအသေးစားလုပ်ကွက်ကြီးတွေလုပ်ကွက်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း. ငါတို့သည်လည်းအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏အုပ်ကြွပ်အောင်အက်လုပ်ကွက်ကိုသုံးပါ, ကျွန်တော်တို့ဟာလတ်ဆတ်ရလျော့နည်းပစ္စည်း crack နိုင်အောင်ကျနော်တို့အုပ်စုဖွဲ့စောစက်က loading ရှေ့တော်၌ထိုအက်ကွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အက်စိတျအပိုငျးကိုဖယ်ရှား.
လုပ်ကွက်များ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအမိန့်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်ပြု. အခြို့သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ခဲ့လျှင် 10 မီလီမီတာအုပ်ကြွပ်, အဆိုပါလုပ်ကွက်များ၏အထူဖြတ်နေကြတယ် 15 မီလီမီတာ (ဒီထက်လျော့နည်း, အဆိုပါတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါချိုးမည်), သင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင် 20 မီလီမီတာအုပ်ကြွပ်, ကျနော်တို့အတွက်လုပ်ကွက်ဖြတ် 20 မီလီမီတာအထူနှင့်သင့်လိုအပ်ချက်လျှင် 30 မီလီမီတာ tile ကို, ကျနော်တို့ကဖြတ်ပါလိမ့်မယ် 30 မီလီမီတာအထူ. ဤလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်, ကျွန်တော်ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောအထူအတွက် Verde ဂွာတီမာလာ၏ကုန်ကြမ်းကျပန်းပြားရ 1.5 စင်တီမီတာ,2စင်တီမီတာ, နှင့်3စင်တီမီတာ.
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းသို့မဟုတ် Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ Polish
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်၏ဖြတ်ပြားအလိုအလျောက်စက်ပေါ်အရောင်ရရှိသွားတဲ့. အဆိုပါစက်များပုံမှန်အားရှိ 16 Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏လုံးတီးမျက်နှာပြင် polish မှအကြီးအကဲများ. တစ်ခုချင်းစီကိုဦးခေါင်းအမြင့်ဆုံးချောရဖို့ပွန်းစားခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်. ဤရွေ့ကားခေါင်းဆောင်များ polishing များအတွက်လိုင်းအတွက်စုဝေးနေကြတယ်. အဟောင်းကိုအချိန်အတွက်, လူတွေကလက်ပိုလနျပေါ်စကျင်ကျောက် polish ရန်အသုံးပြု, အရာတစ်ခုတည်းခေါင်းကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာအစကောင်းသောချောရနိုင်. တစ်ခုတည်းခေါင်းကိုပွတ်နှင့်အတူအဓိကပြဿနာဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အချိန်စားသုံး. ဒါဟာစီမံကိန်းများနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်.
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းတစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲမြွေကျောက်နှင့်ကအလွန်ကောင်းသောချောကြာ. ပွတ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါယေဘုယျအားပိုကြီးတဲ့ဧရိယာထဲမှာအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်. အားလုံးပြားစာအုပ်လိုက်ဖက် format နဲ့ပွတ်နေကြတယ်.
ရှိပါတယ်3အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များအတွက်အထူအမျိုးအစားများ, 1 စင်တီမီတာ,2စင်တီမီတာ, နှင့်3စင်တီမီတာ. Different types of projects have different requirements of sizes, ဤရွေ့ကားလေးအသုံးအများဆုံးအရွယ်အစားများမှာ:
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကြွေပြား 60x30x2 စင်တီမီတာ
60x30x2 စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစားအတွက် tiles အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အတွင်းရရှိနိုင်အသုံးအများဆုံးအရွယ်အစားများမှာ. ဤရွေ့ကားကြွပ်ယေဘုယျအားဖြင့်အခင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်.
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကြွေပြား 60x60x2စင်တီမီတာ
ဤသည်အရွယ်အစားပိုကြီးတဲ့စီမံကိန်းကိုအခင်းများအတွက်ယေဘုယျအား အသုံးပြု. အဘယ်မှာရှိသနည်း client ကိုအခင်းအဘို့အစတုရန်းအရွယ်အစားအုပ်ကြွပ်လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်.
ချိန်ညှိထားသောကြွေပြား 24″x12″x က 1 စင်တီမီတာ
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်များချိန်ညှိအုပ်ကြွပ်အများအားဖြင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်. သင်ကချိုးမည် flooring ထဲမှာကိုအသုံးပြုနေလျှင်ဤအပါးလွှာအုပ်ကြွပ်ဖြစ်ကြပြီး. လည်း, အဆိုပါအုပ်ကြွပ်အတွက် 1 စင်တီမီတာအထူမြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အလွန်ကောင်းပါတယ်, သူတို့ထက်ပေါ့ပါးများမှာ2စင်တီမီတာအုပ်ကြွပ်.
ချိန်ညှိ Tile 24″x24″x က 1.2 စင်တီမီတာ
ဤရွေ့ကားကြွပ်ပိုကြီးတဲ့ဧရိယာ၌မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်. tile အုပ်ကြွပ်၏ 1 ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောအရွယ်အစားစင်တီမီတာကိုချိုးဖျက်စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့၏အထူကိုထိန်းသိမ်းရန် 1.2 စင်တီမီတာ.
အပြင် Verde ဂွာတီမာလာစိမ်းစကျင်ကျောက်အတွင်းကြွပ်အထက်မှအောက်ပါအရွယ်အစားလည်းရရှိနိုင်ပါသည် :
60x40x2 စင်တီမီတာ &3စင်တီမီတာ
40x40x1 စင်တီမီတာ,2စင်တီမီတာ &3စင်တီမီတာ
Flodeal Inc မှမှာ, အကြှနျုပျတို့သညျကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အုပ်ကြွပ်အရသေချာ. tile ကိုသစ်သားသေတ္တာထဲမှာထုပ်ပိုးပြီးကျနော်တို့ကသေတ္တာထဲမှာဖုန်မှုန့်မဆိုကြင်နာရှောင်ရှားဖို့သေတ္တာကျော်ပလပ်စတစ်ခြုံ. လည်း, အဆိုပါအုပ်ကြွပ်ကဖြတ်တောက်ခြင်းစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်သကဲ့သို့သင်အုပ်ကြွပ်ရထိုကဲ့သို့သောလမ်းထဲမှာထည့်ထားကြသည်. ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန် 8-10 အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အုပ်ကြွပ်၏ကွန်တိန်နာလစဉ်လတိုင်း. ငါတို့သည်လည်းခြေလှမ်းများအောင်, Risers, စီမံကိန်းကိုအလုပ်အတွက်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်အတွင်းအရွယ်အစား Cut. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျ ဒီမှာ အိန္ဒိယကနေ Verde ဂွာတီမာလာစိမ်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကွက်များဝယ်ယူရန်.
နိုဝင်ဘာလ 20, 2018 |0မှတ်ချက်များ